Ọrụ & OZI |
Ọrụ & OZI
Na-ese n'elu mmiri pendant crystal oriọna-Oyi kpọnwụrụ
Linear Pendant lamp with S14s na S14d led filament linear tube lamp
Laghachi na mbụ Edison bọlbụ na-achụso bọlbụ na mma nke dị ọcha
Omenala ọkụ matte ọcha na elu-ọgwụgwụ na okomoko mmetụta
Omenala Lighting fixtures maka Chicago Hotel
Hotellọ nkwari akụ a dị na obodo Chicago na-eme mkpọtụ. Nke a bụ ndekọ ego. Site na mgbe izizi ị batara, ị ga-eche na ị banyere n’elu oghere ọzọ. E nwere nanị ụdị ụlọ ọrụ mmepụta ihe ole na ole, obere chandeliers, na ọkụ a na-ekpo ọkụ dị jụụ na ihe efu. Nke a bụ akụkụ nke cafe nkwari akụ ...